Iikhitshi zoMdibaniso weMibala yeKhitshi - Kitchen Cabinets Color Combination
Home Iikhitshi zoMdibaniso weMibala yeKhitshi
Ikhitshi yeyona ndawo ibalulekileyo yokuhlangana endlwini yakho; Zombini ulwaneliseko lwakho kunye nokuthengisa kwakhona. Ke ngoko ukukhetha into efanelekileyo kwiikhabhathi zeekhitshi zakho kusisiseko. Uninzi luhlengahlengisa kwakhona okanye ukhethe izicwangciso zomgangatho ezibandakanya ikhitshi kwindawo eqhelekileyo, kwaye rhoqo akukho khitshi / imimandla yokutya / yeparlor. Ukwenza ukhetho lwe-Bureau shading lukhethe icandelo lokuseta imeko yengqondo kunye nokwenza uyolo kwindawo yakho ebalulekileyo yokuphila. Nokuba kunokuba kunjalo, ukukhetha i-shading efanelekileyo ekhitshini lakho kunokuba nzima kunokuba kulindelwe. Oku kuhlala kuqhuba abanini beepropathi ukukhetha iVanilla.
Kutheni kufanelekile ukuba ucinge ngokusetyenziswa kombala ongeyona-nonpartisan kwiikhabhathi zakho
Abahlali abanobambiso rhoqo baba mathidala ukucinga ngaphandle kokungathathi cala (ndiza kuqulunqa ibhlogu kamva eyona ndlela ilungileyo yokufumana ukungabi namkhethe kwekomityi yekhitshi yasekhitshini) kuba besoyikisela oko kunokuba nefuthe ekuthengisweni kwakhona kamva. Ziyekelela ngakumbi ii-khabhathi zekhabhathi ekhitshini ngenxa yokubaluleka kwekhitshi elingaqhelekanga ukuthengisa ikhaya. Ewe, ikhitshi luphawu oluphambili lwabathengi.
Abathengisi bahlala becinga ukuba ngamathuba okufumana ikhaya labo ngokubanzi babandakanyeka ukuba kuya kubakho inzondelelo ngakumbi ngalo. Ukuqiqa okuqhelekileyo kuya kucenga ukuba abathengi abanokubakho ngaphezulu kwereyithi ebiza ngakumbi umrhwebi oza kuyifumana. Ngayiphi na imeko, ayikhathaleli ukuqwalasela ubungakanani beminikelo efikelelekayo kwintengiso esebenzisa le ndlela yolingano isisiseko. Inyani yomcimbi kukuba ukungathobeki kuthetha ukuba ngelixa kusaya kubakho isiseko esibanzi ngakumbi sabathengi abanokubakho kuya kubakho ukukhetha okuthe kratya.
Isakhiwo esikhulu sisicwangciso esihle; Kwaye ukhumbula ukuba ii-hues ezahlukeneyo ziya kujongana nabantu abambalwa ziya kuthetha nabantu ngokwezinga elibaluleke ngakumbi. Uya kuthi ngokufanayo ube nesibonelelo sokunyuka ngokuchaseneyo nakuphi na ukukhetha kwezi ngqondo zabanye; Yindlela yokuthengisa umzi wakho ukuba uyongeze.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uyithanda ikhitshi lakho ukuze ukhethe umjikelo kwaye akugqibezele amandla. Zimisele ukwenza oko abanye bengenguye. Onke amacandelo kufuneka aqhubele phambili kwicala lesiseko senjongo eqinileyo. Ubume obukhulu bukhonkxiwe ngokuphuma emilenzeni, uqhuba indlela, kwaye ube nokubetha kwimfuno yakho yesimbo sakho.
Amanqaku anomdla xa ukhetha umbala weekhitshi zeKhitshi
Kwiimeko ezininzi sithi “indlu inyula i-shading” kwaye ukhetho olukhulu lokufiphaza luya lusanda malunga nokulahlwa komthunzi, nakweyiphi na imeko xa kuqala inkqubo.
Cinga ngezinto ezingazukutshintsha. Mhlawumbi uyawathanda umkhombandlela wakho wangoku / ukufafaza ngasemva kunye nezixhobo zokungena okanye unokwenza ilitye okanye umsebenzi wezitena kwigumbi lokudibanisa. Kuya kufuneka ukhethe umngxunya oya kuhambelana nofakelo olungenakutshintsha. Kuya kufuneka uyazi ngeempembelelo ukukhanya okuya kuba nakho kwigumbi kwigumbi lokuhlala. Ngaba luphawu lokukhanyisa?
Imitha? I-Fluorescent? Umxube ezimbini? Ukukhanya kuya kuphembelela indlela umthi ubonakala ngayo, kwaye imbonakalo iya kutshintsha ngokufanayo nexesha lomhla nobusuku njengokudityaniswa kotshintsho lwesibane.
Qhubeka wenze umzekelo wokungena ukuze ukukunike umkhuluwa wecala lokuhambisa.
Okwangoku uyaqonda ukuba enye yeendlela eziphambili zokutshintsha ikhitshi lakho (kunye neendlela ezahlukeneyo kwikhaya lakho) kwiindleko ezinengqondo kukupeyinta iikhabhathi zekhitshi lakho. Yayiqhelekile malunga neminyaka eli-10 ngaphambi kokuba imephu yeekhabhathi kunye neOlibhodi ehlaziyiweyo ibe zezesona sigqibo saziwayo nangona kunjalo ukupeyinta iikhabhathi kuye kwajika kwaba ngumgangatho
Siphinda sisebenze kwakhona kwiikhabhathi zeekhitshi zasekhitshini (kunye neekomityi zeeshawari, njalo njalo) eCleveland, OH zone kunye nenye yezona zinto zifunwayo. Nantsi inxenye yeemodeli zethu esizithandayo (konke okuvela kowethu umsebenzi) ecaleni kwenkcazo yokwenza ukuba ukhethe eyona nto ilungele ikhaya lakho. Ukuba awukhumbuli ukukhumbula kwakhona, xa ukhetha nayiphi na imilo yepeyinti ukuba uninzi lweempahla ezahlukeneyo ezikwigumbi zinefuthe elibonakalayo. Isithunzi esinye sinokubonakala simangalisa kwikhitshi lomnye umntu okwangoku.
Imhlophe isesona shading saziwayo saziwayo njengoko senzekile kuwo nawuphi na umcimbi weminyaka emihlanu okanye kwenye indawo ekufutshane. Isizathu esinye esimhlophe kukuba umfudlana ophambili usezandleni zenza ubuninzi beendawo ezahlukeneyo ekhitshini, (umzekelo, abahluli kunye nezinto zokubala). Iikhabhathi ezimhlophe ezipeyintiweyo zinokubangela ukuba ikhitshi elincinci libonakale likhulu ngokupeyinta abahluli ukuba ilayite elula.
Iikhabhathi eziGrey / Cream ezipeyintiweyo
Okwesibini okuxhaphakileyo kwe-bureau shading yi-grayish okanye i-cream. Kumakhaya amaninzi i-shading emhlophe eqaqambileyo kwiikhabhathi zekhitshi inokuqaqamba kakhulu. Oku kuhlala kuyimeko ukuba iintsalela zetram endlwini zi-grey okanye ukuba iikhawuntari okanye umgangatho womhlaba ekhitshini usecaleni lokufudumala kwinqanaba lokufikisa. Umzekelo, kwibala apho iikhawuntareyitha zakho zineethoni ezimibalabala ngombala okanye ngatyheli, ngelo xesha umthunzi ompinki unokuba lincome ngendlela engaqhelekanga.
Imisebenzi ye-shading iyathandeka (kwaye ijongeka ibukeka ngakumbi) ekhitshini ngenxa yee-hues ezahlukeneyo. Kuba abahlukanisi bangumthunzi oluhlaza kwaye i-backsplash ineethoni ezinombala omnyama, oku kufiphaza okumdaka kukubancoma kakuhle.
Ukupeyinta iikhabhathi zeKhitshi Grey
Dim lelona lusapho laziwa kakhulu ngokufaka isithunzi ngokwahlula-hlula, kodwa ngaba yeyona ilungileyo shading kwiikhabhathi zekhitshi lakho? Ngokuqinisekileyo sisigqibo esivelileyo nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba ‘sithandwa’ kunokuba simhlophe kwaye sibe ngwevu. Ngokukwanjalo nangayiphi na imithunzi kuya kuxhomekeka kwintsalela yokuhombisa kwakho nje imigangatho kunye nezikhokelo. Ukukhanya okukude kunye nobumnyama obumnyama bobabini badume ngeebhasikiti. Ukufiphala okuqaqambileyo kunokuba bukhali ngakumbi kwiikhabhathi zekomityi, umzekelo, ukupeyinta isiqithi okanye iikhabhathi ezisezantsi ezinombala.
Iikhabhathi zeKhitshi ezipeyintiweyo zeBlue
Kwimeko yokuba ngoku unetoni emnyama kunye emhlophe ekhitshini lakho, enye into emangalisayo yokupeyinta iikhabhathi zakho inokuba ngumkhosi wamanzi waselwandle oluhlaza. Oku kunokuba kusetyenziswe kakuhle kwinxalenye yeekhabhathi kunokuba kufakwe nganye kuzo kunokuba yinto emnandi ukugxininisa kunye nenqaku lokudibana. Ngokungathandabuzekiyo ayisiyo wonke umntu kwaye ayifanelanga ukuba yaziwa nje kwiminyaka emi-5 okanye ke ngoku ngeli xesha langoku (ngo-2018) yeyona ndlela inokwenzeka.
Imibala eluhlaza eluhlaza ekhitshini kwiikhabhathi
Olunye ukhetho lokugqibela lokufikisa ukubonisa ngumthunzi oluhlaza. Njengomkhosi wamaselwandle ohlaza okwesibhakabhaka, olu lukhetho olukhulayo lwesitayile esisebenza sodwa kumakhaya athile. Lo mthungo unokusebenza kumakhaya ngawo onke amathoni ashushu ngakumbi, umzekelo, i-shades ye-beige. Ukongeza kunokwenzeka ukuba kusebenza kakhulu ngwevu engwevu yomtshato kunokuba ibala elimhlophe.
Ngokufanelekileyo eli nqaku libangela ukuba uyile ikhomishini yakho yokupeyinta ekhabhathini. Kukho iitoni zezinto ezizezinye ezinokufikeleleka kwaye zezona zilungileyo kuwe exhomekeke kukhetho lwakho nakwizixhobo ezahlukeneyo ekhitshini lakho. Kwimeko apho uhlala khona eCleveland zone, singathanda ithuba lokuthetha nawe malunga nokupeyinta iikhabhathi zekhitshi lakho. Unokuqhelana nenkqubo yethu kwiphepha lokupenda kweKhabhinethi.